जुटे जनकपुरका अगुवाहरु निधिको पक्षमा « Bikas Times
जुटे जनकपुरका अगुवाहरु निधिको पक्षमा
मिति: December 3, 2017
जनकपुर । दोस्रो चरणको निर्बाचन आउँन पाँच दिनमात्र बाँकी रहेका बेला धनुषामा राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनाबी प्रचारप्रसार र घरदैलो अभियानलाई तीब्र बनाएका छन् । यसै क्रममा, धनुषा निर्बाचन क्षेत्र नंबर ३ मा नेपाली कांग्रेसको चुनाबी प्रचार अभियानमा धनुषाका प्राध्यापक, शिक्षक, समाजसेवी, डाक्टर, इन्जिनियर, कानुन व्यवशायी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा लगायत बिभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले जनकपुरको समग्र विकासका लागि संसदमा कांग्रेस उम्मेद्वार विमलेन्द्र निधिको आबश्यकता रहेको भन्दै निधिको पक्षमा खुलेर भोट मागेका छन् ।
कांग्रेस नेता निधिले संबिधान संशोधन मार्फत मधेशी जनताको हक, अधिकारका पक्षमा काम गरेको र भोलिका दिनमा संबिधानमा मधेशी जनताको थप अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि पनि संसदमा निधिको आबश्यकता पर्ने भएकोले धनुषाबाट बिजयी गराउनु पर्ने उहाँहरुको भनाई छ । मतदाताहरुसंगको भेटमा उहाँहरुले यो कुरालाई बिशेष जोड दिनु भएको छ ।
काठमाडौंमा एकसाता लामो स्वास्थ्योपचारपछि गत बुधबार गृहनगर जनकपुर आउनु भएका कांग्रेस नेता निधिसंगै बरिष्ठ अर्थोपेडिक डा. रामकेवल साह श्रीमति मिलनका साथ जनकपुर आएर निधिका लागि मत माग्नु भएको छ । नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीका डा. साह काठमाडौंको तीनकुनेस्थित कान्तिपुर नर्सिंग होमका संचालक समेत हुनुहुन्छ । डा. साहको जनकपुरस्थित भमरपुरा चोकमा टमा सेन्टर रहेको छ । मिथिला नाट्यकला परिषद्का पूर्ब अध्यक्ष सुनिल मल्लिक कांग्रेस नेता निधिको चुनाबी प्रचारका कार्यक्रममा हरेक दिन सहभागी हुनु भएको छ । मैथिलीका बरिष्ठ साहित्यकार रामभरोस कापडी भ्रमर पनि निधिका पक्षमा हुनुहुन्छ ।
कांग्रेस नेता निधिको समर्थनमा सेवा निबृत्त कर्मचारीका साथै स्थानीय उद्योगी, व्यापारी, सामाजिक संघसंस्था तथा क्लबमा आबद्ध भएकाहरु पनि क्रियाशील छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्ब अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा जनकपुरको विकासका लागि निधिको बिकल्प नभएको बताउनु हुन्छ । पाहुना बनेर धनुषा क्षेत्र नं ३ मा आएका सर्लाहीका राजेन्द्र महतोलाई पाहुनाकै रुपमा व्यबहार गरेर ससम्मान सर्लाही फर्काउनु पर्ने झाको भनाई छ । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बब्लु झा लोकतन्त्र र मधेशी जनताको अधिकार संरक्षणका लागि कांग्रेसका निधि मधेशको निर्बिकल्प नेता भएको बताउनु हुन्छ ।
काग्रेस सभापति देउवा र पौडेल पक्ष बिधान संशोधनमा विवाद
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन गर्न
कांग्रेस नेता बाँस्तोलाको आजै अन्त्येष्टि गरिने
काठमाडौँ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको आज साँझ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । गएराति
रहेनन् कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बास्तोला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको निधन भएको छ । शनिबार राति खुमलटारस्थित निवासमै